Atụmatụ abụọ ọzọ Seth na-efu na nyocha | Martech Zone
Sọnde, Febụwarị 15, 2009 Sunday, May 29, 2016 Douglas Karr
Nicki tweeted banyere post Seth Godin: Ise Atụmatụ maka nnyocha ndị e mere. Echere m na Seth hapụrụ ndụmọdụ dị mkpa:
Nke mbu, biko emela nyochaa ndị ahịa gị ọ gwụla ma ị dị njikere ime ihe na nsonaazụ.
Nke abuo, aga m akwado usoro nyocha ọ bụla na-amalite site na otu ajụjụ, “You ga-akwado anyị?”
Dịka Seth kwuru na post ya, ịjụ otu ajụjụ nwere ike ịgbanwe nzaghachi onye ahụ na ajụjụ ndị na-esote. Aga m akwado ịziga otu ajụjụ a na mbụ - wee zaghachi na nyocha nke na-aza nzaghachi.
Ọ bụrụ na-amasị gị, jiri ezigbo usoro nyocha nke ahụ na - enyere gị aka ịjụ ajụjụ nke ngalaba dabere na nzaghachi - otu a ị nwere ike ị belata azịza maka isi okwu karịa ịjụ ọtụtụ ajụjụ na-abụghị isiokwu.
Tags: seth godinnnyocha e merengwaọrụ nyocha
Uzo ozo di na Google Analytics?
Feb 15, 2009 na 3:45 PM
Nnukwu mgbakwunye na ndepụta dị mma!
Feb 15, 2009 na 4:17 PM
Enwere m ike ịgbakwunye na anyị kwesịrị ịkọwara ndị ahịa ihe kpatara otu ihe kpatara nyocha ahụ. (afọ ojuju ndị ahịa, nkọwa ngwaahịa maka mmelite ma ọ bụ ngwaahịa ọhụrụ, wdg). Ndị ahịa na-azaghachi nke ọma ma ọ bụrụ na ha maara ihe azịza ha ga-abụ.